Pipe Clamp China Manufacturers & Suppliers & Factory
Pipe Clamp - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Pipe Clamp)
I-Aluminium Clamp ye-25mm Carbon Fiber Tube Incazelo Yomkhiqizo 12mm-30mm wangaphakathi wepayipi ungqimba wepayipi, ukubukeka kwe-cnc machining ukubukeka okukhangayo, ukwelashwa komhlaba ongaphezulu. Izinga eliphakeme lekhwalithi ephezulu ye-aluminium multi-axis universal, isebenzisa indiza ye-aluminium yendiza,...
Izicucu ze-16mm ze-Aluminium tube carbon clamp clamp
Izicucu ze-16mm ze-Aluminium tube carbon clamp clamp Incazelo Yomkhiqizo 12mm-30mm wangaphakathi wepayipi ungqimba wepayipi, ukubukeka kwe-cnc machining ukubukeka okukhangayo, ukwelashwa komhlaba ongaphezulu. Izinga eliphakeme lekhwalithi ephezulu ye-aluminium multi-axis universal, isebenzisa indiza ye-aluminium...
izinga eliphakeme le-hinged pipe clamp 20mm25mm30mm ububanzi
izinga eliphakeme le-hinged pipe clamp 20mm25mm30mm ububanzi Incazelo Yomkhiqizo I-12mm-30mm yangaphakathi ye-aluminium carbon fiber tube clamp clamp, ukubukeka kwe-cnc machining ukubukeka okuhle, ukwelashwa komhlaba. Izinga eliphakeme lekhwalithi ephezulu ye-aluminium multi-axis universal, isebenzisa indiza...
I-Anodized Aluminium Hose Clamp
I-Anodized Aluminium Hose Clamp Incazelo Yomkhiqizo I-12mm-30mm ubukhulu yangaphakathi i-Tube Clamps Insimbi Engagqwali, Izingxenye zeCnc Machining ukubukeka okukhangayo, ukwelashwa okungaphezulu kwe-anodised. Izinga eliphakeme lekhwalithi ephezulu ye-aluminium multi-axis universal, isebenzisa indiza ye-aluminium...
I-Carbon Fiber Tube Clamp ye-UAV
I-Carbon Fiber Tube Clamp ye-UAV Incazelo Yomkhiqizo I-Round carbon fiber tube clamp isetshenziswa kabanzi emkhakheni we-drone.Nxa inenzuzo elula yesisindo, amakhasimende amaningi ajabule ngezinto ze-aluminium. Ubulukhuni be-aluminium engu-6061 banele.Certianly, uma udinga i-super hard, mhlawumbe ungakhetha u-7075...
I-Aluminium alloy 6061-t6 Separators Hose Clamp
Nikeza Ngokuqondile i-Aluminium Metal Round Tube Hose Clamp Incazelo Yomkhiqizo I-Round carbon fiber tube clamp isetshenziswa kabanzi emkhakheni we-drone.Nxa inenzuzo elula yesisindo, amakhasimende amaningi ajabule ngezinto ze-aluminium. Ubulukhuni be-aluminium engu-6061 banele.Certianly, uma udinga i-super hard,...
I-Hard Duty Aluminium Clamp Ye-D20mm Tube Carbon fiber pole's Incazelo I-Round carbon fiber tube clamp isetshenziswa kabanzi emkhakheni we-drone.Nxa inenzuzo elula yesisindo, amakhasimende amaningi ajabule ngezinto ze-aluminium. Ubulukhuni be-aluminium engu-6061 banele.Certianly, uma udinga i-super hard, mhlawumbe...
I-aluminium round tube clamp yezingxenye zezokwelapha
I-aluminium round tube clamp yezingxenye zezokwelapha Incazelo Yomkhiqizo I-Octagonal carbon fiber tube clamp isetshenziswa kabanzi emkhakheni we-drone.Nxa inenzuzo elula yesisindo, amakhasimende amaningi ajabule ngezinto ze-aluminium. Ubulukhuni be-aluminium engu-6061 banele.Certianly, uma udinga i-super hard,...
Izithambisi Zepayipi Yesitayela Esilodwa se-Aluminium Clamp
Izithambisi Zepayipi Yesitayela Esilodwa se-Aluminium Clamp IHobbycarbon ngumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machining, insizakalo yokusika i-carbon fiber CNC kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC inqubo yokukhiqiza efezwa ngokucindezela...
I-OEM Precision aluminium Pipe Clamp Tube Clamp
I-OEM Precision aluminium Pipe Clamp Tube Clamp IHobbycarbon ngumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machining, insizakalo yokusika i-carbon fiber CNC kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC inqubo yokukhiqiza efezwa ngokucindezela okukhulu noma...
Carbon tubes aluminium clamp pipe clamp Incazelo Yomkhiqizo I-aluminium clamp evundlile evamile ukuyisebenzisa ku-octagonal carbon fiber tube.Yizingxenye ezimbili ezihlukene futhi idinga isikulufa ukuyifaka. Sinezintambo ezivundlile ze-aluminium kanye ne-roll aluminium clamp . Imininingwane: Umbala: omnyama / obondayo...
Pipe Clamp I-Aluminium Pipe Clamp IHinged Pipe Truss Clamp I-Carbon Fiber Pipe Clamp I-Tube Clamp Nz Ngi-Beam Tube Clamp Round Pipe Clamp Nge-Rubber Kuhleliwe iRod Clamp